Daawashadda badan ee teleefeyshinka oo sameeyn ku reeba caafimaadka carruuraha | Somaliska
Carruuruhu waxeey aad u jecelyihiin daawashadda muuq baahiyaha ama telefeeyshinka waxa loo yaqaano, saas oo ay tahayna waxaa uu dahaaran waxyaabo badan oo caafimaadka carruurta halis u ah.
Quburo badan oo culuumta caafimaadka taqasus iyo fiiro dheer u leh ayaa maalin walba uga hadla waxyaabaha saameeya caafimaadka carruurta oo ay ka mid tahay koroomidooda iwm. Waxaa u dheer xagga waxbarashadda oo uu fiirsashada badan ee teleefeyshinka saameeyn ku yeesho taasoo macalimiinta iskuuladdana ay in badan qeylo afka labadiis furteen. Warbaxin uu diyaariyay Dr Aric Sigman oo u dhashay wadanka Ingiriiska islamarkaasina ku takhasusay cilmi nafsiga ayaa cilmi baaris uu ku sameeyey arrimaha sababa qaarkood ee sababa caafimaad xumidda carruuraha ay ka mid yihiin daawadshada badan ee carruurahu daawadaan telefeeyshinka.
Dhaqtarka oo dhowr arrimood cuskaday ayaa sheegay in hilibka ama cayilka oo ilmama ku kordha, araga oo ka xumaada, hoos u dhac ku yimaada iyo hormoonka jirka oo is badalaa ay intaba sabab u yihiin daawada badan ee carruurti daawato tv-ga.
Dhinaca kale daawada teleefeyshinka sida muuqata waxaa ku yimid hoos u dhac marka loo eeggo aaladaha kale ee badalay tv.ga sida kombiyuutarada lugu ciyaaro, Aaaybaad-yada (ipads-ka) oo carruuruhu kala socdaan baraha bulshadda. Qubradda warbixintan diyaarisay ayaa sheegay inaaneey haatan u muuqal xal carruuraha looga hakin karro adeegsadda aaladaha ku keenaya xaalad caafimaad darro oo ay ugu horeeyso cayilka iwm. Tanoo misna farta lugu fiiqay sida eeysan waalidku ugu baraarugsaneyn.
Jiilaalkii waa laga baxay oo gugii ayaa la gaaray
September 5, 2017 at 00:41
Aadbaad umahadsantihiin bahda somaliska. Sida qiimaha badan ee aad noogu soo gudbinaysaan wax walba oo wax tar ulle bulshaweynta soomaaliyeed ee ku xiran meeshan. Oo aan oran karo waa bar bulshada u ah wehel,sxb ,